यस गर्मीमा वातानुकूलन बचत गर्न keys कुञ्जीहरू बेजिया
यस गर्मीमा एयर कंडीशनिंग बचत गर्न conditioning कुञ्जीहरू
मारिया vazquez | 05/06/2021 10:00 | घर
गर्मीको आगमन र तापक्रमको बृद्धिले वातानुकूलनको दुरुपयोग नगरी धेरैलाई असहनीय बनाउँछ। यद्यपि त्यहाँ केहि सन्तुलन प्राप्त गर्न हामी धेरै गर्न सक्छौं र वातानुकूलन बचत गर्नुहोस्। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ?
वातानुकूलनको खपत कम गर्नु दुवै वातावरण र हाम्रो जेबको लागि महत्त्वपूर्ण छ। केहि कुञ्जीहरू छन् जुन हामी आज तपाईंलाई साझेदारी गर्दछौं र त्यसले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ आफ्नो घर चिसो राख आवश्यक पर्ने बेलामा मात्र वातानुकूलकको प्रयोग गर्दै। यस्तै कुञ्जीहरू:
1 राम्रो इन्सुलेशन
2 सही भेन्टिलेसन
3 अन्धा र awnings को स्थापना
4 फ्यानहरूको प्रयोग
राम्रो इन्सुलेशन हो वातानुकूलन बचतको लागि कुञ्जी। वातानुकूलनको केही उपयोग छैन यदि गरीब विन्डो इन्सुलेशनले बाहिरको ताप हाम्रो घरमा प्रवेश गर्न दिन्छ र इनडोर एयर कंडीशनिंगले प्रदान गरेको चिसो हावामा उम्कन मद्दत गर्दछ।
राम्रोसँग इन्सुलेटेड विन्डोजमा लगानी गर्नाले हामीलाई वातानुकूलन खपतको समयलाई कम गर्न मात्र शक्ति दिन्छ। विशेष गरी जब घर यस्तो तरीकाले अभिमुख हुन्छ कि दिनको प्राय जसमा सूर्य यसको चम्किन्छ, यो पनि सुविधाजनक हुनेछ। सौर नियन्त्रण गिलास स्थापना गर्नुहोस् तिनीहरूले आगमन प्रकाश को प्रतिबिम्ब को कम र गर्मी बाहिर बाउन्स।
हामीले एक भन्दा बढी अवसरमा कको महत्त्वको बारेमा कुरा गरेका छौं हाम्रो घरको सही भेन्टिलेसन। यसैले, जाडोमा आदर्श दिनको केन्द्रीय घन्टामा भाँडा हावामा लिनुपर्दछ, ग्रीष्म theतुमा आदर्श भनेको यसमा गर्नु हो। बिहान वा रातमा पहिलो चीज हाम्रो घरमा तातो प्रवेश रोक्न।
भेन्टिलेटिंग पछि र मध्य बीचमा पुग्नु अघि, कोठाका ढोकाहरू बन्द गर यो सधैं एक ठूलो रणनीति हो एक र अर्को को बीच गर्मी विनिमय जोगिन। यस तरीकाले, उत्तरतर्फ फर्केका कोठाहरू शान्त रहनेछन् र हामी दक्षिणको सामना गरिरहेका मानिसहरूले तातो हुने बाटो रोकिनेछौं जसले बाँकी स्थानलाई तातो पार्दछ।
अन्धा र awnings को स्थापना
हाम्रो देशमा, गर्मीमा हामीले उच्च तापक्रमको कारणले, अन्धा नभएको घरको कल्पना गर्न गाह्रो छ। यसले हामीलाई अनुमति दिन्छ हाम्रो घर तंग बन्द गर दिनको केन्द्रीय घण्टाको बखत, यसले हाम्रो घर कूलर र गाढा राख्न मद्दत गर्दछ।
ब्लाइन्डहरू, जस्तै awnings र थर्मल पर्दा, को रूप मा सेवा सूर्यबाट प्रकाश र तातोमा बाधा। यदि बिहान सब भन्दा पहिले हावामा हावा हाले पछि हामी आफ्नो अन्धालाई कम गर्दछौं, कोठाहरू शीतल रहनेछ। के तपाईंलाई थाहा छ कि awnings को उपयोगले 10ºC सम्म घरको तापक्रम घटाउन सक्छ?
प्रशंसकहरू, विशेष रूपमा छत फ्यानहरूले, एउटा भावना सिर्जना गर्छन्3inC र 5ºC का बीचमा तापमानमा ड्रप गर्नुहोस्, धेरै कम बिजुली खपत संग। तसर्थ, यदि हाम्रो शहरको तातो अत्यधिक छैन वा हामी घरमा धेरै समय खर्च गर्दैनौं र पर्याप्त दिनचर्याहरू राख्दैनौं, एउटा प्रशंसकले हामीलाई गर्मीमा आरामदायी महसुस गर्न र वातानुकूलन बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
जब वातानुकूलन खोल्न आवश्यक छ, यो आफ्नो टाउको संग गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सामान्य भन्दा कम तापक्रममा राख्दा घर चाँडो चिसो हुँदैन र अत्यधिक खपत हुने छ जुन पछि बिजुली बिलमा झल्किन्छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार उपयुक्त तापमान त्यो एक हो यो २ºº र २º डिग्री सेन्टिग्रेड बीच चल्छ। प्रत्येक डिग्री तपाईंले थर्मोस्टेट कम गर्नाले खपत%% ले वृद्धि गर्दछ। अर्को शब्दहरु मा, यदि तपाई २ ther डिग्री सेल्सियस को लागी तपाइँको थर्मोस्टेट सेट गर्नुहोला, तपाइँ तपाइँको खपत को १ 8% को बचत हुनेछ। थप रूपमा, तातो लहर वा विशेष गरी तातो दिनमा, विभिन्न अध्ययनहरूले एयर कन्डिसनलाई बढ्तै नहुनको लागि साधारण चाल प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छ: तापक्रममा थर्मोस्टेटलाई बाहिरको तापक्रमबाट १२ डिग्री सेल्सियस घटाउँदा परिणाममा सेट गर्ने।
यो बिना कहिकै जान्छ कि वातानुकूलित घण्टा घटाउनुका साथै, कुशल उपकरण किन्नुहोस् एक A +++ सूचकको साथ, यसको मतलब Cons०% सम्मको बचत हुनेछ, ऊर्जा उपभोक्ता संघ एएएनईका अनुसार।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » यस गर्मीमा एयर कंडीशनिंग बचत गर्न conditioning कुञ्जीहरू
स्वस्थ खाना कसरी सुरू गर्ने
बच्चाहरूमा भाषण ढिलाइ